Dowlada Somalia oo Ka Soo Horjeesatay Heshiiskii Lagu Qeybsaday Saamiga Dekeda Berbera -Akhriso
Friday March 02, 2018 - 11:03:35 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Xukuumada federaalka Somalia ayaa sharci daro ku tilmaantay heshiis shalay Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadku ku kala saxiixdeen dowladda Itoobiya Maamulka Somaliland iyo Shirkada DP World, kaasoo qeexaya in dowladda Itoobiya ay saami ku yeelato Dha
Xukuumada federaalka Somalia ayaa sharci daro ku tilmaantay heshiis shalay Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadku ku kala saxiixdeen dowladda Itoobiya Maamulka Somaliland iyo Shirkada DP World, kaasoo qeexaya in dowladda Itoobiya ay saami ku yeelato Dhaqaalaha ka soo baxa dekada magaalada Berbera.
Heshiiskaas ayaa loo fadhiyay muddo dhowr maalmood ah, waxaana ugu dambeyn la isku raacay in 51% saamiga horumarinta dekedda yeelato shirkadda DP World, 30% waxaa yeelaneysa Somaliland, halka 19% ay yeelaneyso dowladda Itoobiya.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay War-saxaafadeed iyadoo heshiiskaas ku tilmaantay mid lidi ku ah qaranimada dalka iyo shuruucda caalamiga ah sidan hoose ayuuna u qornaa War-saxaafadeedka.
Waxaa warbaahinta lagu baahiyay inuu jiro heshiis ku saabsan maalgashiga Dekedda Berbera kaasoo u dhaxeeya Shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta iyo Dowladda Federaalka Itoobiya.
Wasaaradda Dakadaha iyo Gaadiidka Badda, oo wakiil uga ah arrimaha dekadaha dalka oo dhan Xukuumnadda Federaalka Soomaaliya, waxaay caddeynaysaa;
In Dowladda Federaalka Soomaaliya aysan qeyb ka ahayn, cidna aysan u wakiilan in heshiiskaas lala saxiixdo Shirkadda DP World.
In heshiiskaas uu lid ku yahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
In habraaca loo maray heshiiskaas uu yahay mid aan waafaqsanayn Dastuurka Ku meel Gaarka ah iyo shuruucda kale ee uu yaalla Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa cid walba oo dooneysa inay maalgashi ku sameysato khayraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka, hase yeeshee waxay caddaynaysaa in haya’daha dustuuriga ee dalka oo kaliya, sida Xukuumada Federaalka iyo Baarlamaanka Federaalka ay yihiin kuwa keliya ee ku shaqada leh go’aan ka gaarista iyo ansixinta heshiiskan iyo kuwa noociisa ah.